China Optical Window, Sapphire Window, Sappire Windows Mugadziri
Tsanangudzo:Optical Window,Sapphire Window,Sappire Windows,Optics Hwindo,,
Zvigadzirwa zve Optical Window , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Optical Window , Sapphire Window vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Sappire Windows R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Optical windows anoshandiswa kuitira kuchengetedza zvisina kusimba opareti zvinhu mukati memidziyo, ivo vanogamuchirwa kutsaura miviri yemuviri nharaunda vachibvumira mwenje kuti upfuure. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 1mm ~ 300mm...
Makara magirazi mahwindo emhando dzakasiyana-siyana kubva kuna ultraviolet kuenda kune infrared anoshandiswa zvakanyanya muzviridzwa zvinoda chaiyo spectroscopy, senge kutaurirana kwemagetsi, kugadziridzwa kwevevelength, kuongororwa kweultraviolet,...
UV yakasanganisa mawindo esilica anopa kutapurirana kwakakwirira kubva kuiyo ultraviolet (UV) kuburikidza neinooneka uye padyo-infrared (NIR). Isu tinopa AR Kuchengeta kweUV, Inooneka, uye NIR. Magadzirirwo: Mashoko: Yakabatanidzwa Silica Dhayamita:...
Optical windows anoshandiswa kuitira kuchengetedza zvisina kusimba opareti zvinhu mukati memidziyo, ivo vanogamuchirwa kutsaura miviri yemuviri nharaunda vachibvumira mwenje kuti upfuure. Isu tinopa AR Kuchengeta kweUV, Inooneka, uye NIR....
Windows yeBorosilicate yakanakira tembiricha yakakwira uye nharaunda mafomu ekushandisa Magadzirirwo: Chinyorwa: Borosilicate Dhayamita: 1mm ~ 300mm Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba Kushivirira: +/- 0.1mm Pamusoro pemhando: 40/20, 60/40...
Optical windows 'chimiro, ukobvu uye kupfeka zvinogona kugadzirwa Magadzirirwo: Chinyorwa: Optical girazi Dhayamita: 1mm ~ 300mm Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba Kushivirira: +/- 0.1mm Pamusoro pemhando: 40/20, 60/40 Bvisa...
Optical windows anoshandiswa kuitira kuchengetedza zvisina kusimba opareti zvinhu mukati memidziyo, ivo vanogamuchirwa kutsaura miviri yemuviri nharaunda vachibvumira mwenje kuti upfuure. Tinogona kupa B270 hwindo muhukuru hwakasiyana, ukobvu uye...
UV yakasanganisa mawindo esilica anopa kutapurirana kwakakwirira kubva kuiyo ultraviolet (UV) kuburikidza neinooneka uye padyo-infrared (NIR). Magadzirirwo: Mashoko: Yakabatanidzwa Silica Dhayamita: 1mm ~ 300mm Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm...
Sapphire Windows inogadzirwa kubva kune imwe chete yekristaro yesafiri AI2O3, mukana wayo wakanyanya kuomarara kwepamusoro, kupisa kwakanyanya kupisa, kwakanyanya dielectric kuramba uye kuramba kune akajairika makemikari acids uye alkalis....
Germanium (Ge) mahwindo anowanikwa kunze kwesherufu aine matatu anti-kuratidzira ekupfeka sarudzo: 3 - 5 μ m yepakati-infrared kunyorera, 3 - 12 μ m ye Broadband multispectral kunyorera, kana 8 - 12 μ m yekupisa kufungidzira. kunyorera. Tinogona...
Zinc selenide hwindo rine hutachiona bhendi rakapamhamha kupfuura silicon uye germanium. Pamwe pamwe nekudzikira kwayo kwakadzika muchikamu chitsvuku cheiyo inoonekwa spectrum, zinc selenide yakanakira masystem emagetsi anosanganisa 10.6 µm CO2...
Calcium Fluoride ine yakakwira kufambisa kubva ku200nm kusvika 7 μ m. Yayo yakaderera kutora uye yakanyanya kukuvara chikumbaridzo chinoita kuti ive inozivikanwa sarudzo yeeximimer laser optics. AR Kuchengeta UV, Visible, uye NIR kunowanikwa....
Windows yeBorosilicate yakanakira tembiricha yakakwira uye nharaunda mafomu ekushandisa. AR Kuchengeta UV, Visible, uye NIR kunowanikwa. Magadzirirwo: Chinyorwa: Borosilicate Dhayamita: 1mm ~ 300mm Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba...
Sapphire Windows inogadzirwa kubva kune imwe chete yekristaro yesafiri AI2O3, mukana wayo wakanyanya kuomarara kwepamusoro, kupisa kwakanyanya kupisa, kwakanyanya dielectric kuramba uye kuramba kune akajairika makemikari acids uye alkalis. Isu...
Calcium fluoride ine hutachiona hwepamusoro kubva ku200nm kusvika 7 μ m. Yayo yakaderera kutora uye yakanyanya kukuvara chikumbaridzo chinoita kuti ive inozivikanwa sarudzo yeeximimer laser optics. Magadzirirwo: Zvinyorwa: Calcium Fluoride (CaF2)...
China Optical Window Vatengi
Optical girazi hwindo rinoreva chidimbu cheyakajeka Optical zvinhu izvo zvinobvumidza mwenje mune yeanoridza chiridzwa. Idzo zvidimbu zvemagirazi ekuona ane ivhu uye kumeso kwakakwenenzverwa ayo akafanana. Optical windows anoshandiswa kuitira kuchengetedza zvisina kusimba oparesheni yezvinhu mukati memidziyo, ivo vanogamuchirwa kutsaura miviri yemuviri nharaunda vachibvumira mwenje kuti upfuure.
Realpoo Optics inogona kupa inoonekera girazi hwindo mune zvinhu zveBK7, Fused Silica, Sapphire, Silicon, ZnSe, CaF2 nezvimwe.
Optical Window Sapphire Window Sappire Windows Optics Hwindo Optic Windows